Famindrana indostrialy hamokatra kodiarana fitaritana nylon avo lenta |
Famindrana indostrialy hamokatra kodiarana fitaritana nilona avo lenta
Ny kodiarana fitaritana nylon dia ampiasaina hanoroana ny làlan'ny zavatra marolafy malemy toy ny fantsom-pandehanana malefaka, tariby vy ary tady nylon mandritra ny hetsika. Ny kodiarana mpitari-dalana dia manana firafitra am-paosy, ary ny kodiarana fitarihana dia mitana andraikitra amin'ny fitsitsiana asa amin'ny tetikasa na vokatra sasany.
Fiandohana: Huai'an, Jiangsu Fitaovana: Nylon, PA6 / MC
Anaran'ny vokatra: kodiarana mpitarika nylon Fanodinana: fanodinana / fanodinana Centrifugal / fanodinana CNC
Loko: santionany amin'ny loko manokana: Mpividy vola
Size: namboarina mifanaraka amin'ny fangatahana,
1. Fanosorana tena tsy misy menaka, arovy ny tady tariby vy.
2. Fiatrehana akanjo tsara, fiainana lava ary lanja maivana
Antsipirian'ny fonosana Matetika izahay dia mampiasa sarimihetsika bubble miampy boaty baoritra, ary raha ilaina dia paleta hazo na boaty. Ny entana madinidinika dia fonosina ao anaty kitapo fanaovana sonia tena + baoritra. Ny entana lehibe dia fonosina ao anaty kitapo hazo + boaty hazo. Ampiasaina ho an'ny teknika avo lenta momba ny teknolojia plastika nylon fehikibo
Eo ambanin'ny tsindry mahazatra, ny monomer caprolactam monomer C6H11NO dia vita amin'ny akora alkaline ho toy ny catalyst, miaraka amin'ny activator sy agents auxiliary hafa mba hahatonga ny monomer ho polymerized, ary atsofoka mivantana ao anaty bobongolo nafanaina amin'ny maripana sasany hanaovana ilay fitaovana Ny fanehoan-kevitra polymerization dia tanterahina haingana ao anaty lasitra, miharo anaty banga matevina mafy, ary avy eo alefa amin'ny alàlan'ny fizotrany mifanaraka aminy mba hahazoana ilay vokatra efa voafaritra mialoha. Amin'ny maha-plastika injeniera azy, ny MC nylon dia "manolo ny vy amin'ny plastika ary manana fahombiazana tena tsara" ary tena be mpampiasa. Izy io dia manana toetra tsy manam-paharoa maro toy ny mavesatra maivana, tanjaka avo, fanosotra tena, fanoherana fanoherana, fanoherana ny harafesina ary insulation.
(1) Mahomby tsara, afaka miondrika tsy misy fiovana, sady mitazona ny hamafiny ary manohitra ny fiantraikany miverimberina;
(2) Fahaleovan-tena tsy mahazaka, manome fampisehoana tsaratsara kokoa noho ny vy vy vy alim-by sy ny laminate fenôlika amin'ny fampiharana fanosotra tsy misy menaka (na voahosotra), mampihena ny fanjifana sy ny angovo angovo;
(3) Raha oharina amin'ny vy dia manana hamafin'ny ambany kokoa ny MC nylon ary tsy manimba ireo faritra masiaka.
Previous: Afaka manome serivisy namboarina tamin'ny pulley Mc nylon avo lenta amin'ny fanao isan-karazany sy ny fepetra arak'izay takiana.
Manaraka: Azontsika atao ny manome serivisy namboarina amin'ny crane nylon crane avo lenta amin'ny fomba isan-karazany sy ny masontsivana araka izay takiana
Kodiarana mitondra nylon
Kodiarana roller nylon
Kodiarana mpitarika nylon kely
Kodiarana nilona kely
Kodiarana nilona kely misy bearings
Afaka manome serivisy namboarina avo lenta ...
manome serivisy namboarina ho an'ny ele ...